SIDA LOO DIYAARIYO BOLETUS EE XILLIGA QABOOBAHA: QALAJINTA, SALTING, LAGU KEYDIYO - MUSHROOMS
Hababka saliid goosashada ee jiilaalka guriga
Maslata - boqoshaada ugu caansan ee ka mid ah soo iibsadaha boqoshaada iyo taageerayaasha kaliya ee sheygan. Sidaa darteed maahan mid la yaab leh in ay jiraan cuntooyin iyo habab badan oo loogu diyaar garoobayo. Oo marti-geliyeyaashu waxay ku faani karaan, iskuduwaha shakhsi ahaaneed. Waxaa sidoo kale jira siyaabo badan oo loo gooyo saliid xilliga qaboobaha.
Habka ugu fiican ee boqoshaada goynta jiilaalka waa qalajinta, taas oo aan wax u dhimi tayada nafaqada iyo dhadhanka sheyga.
Mushrooms waa la qallajin karaa siyaabo dhowr ah: qorraxda, foornada, qalajiyaha korantada ama kariyaha. Laakiin waxaa jira dhowr shuruudo oo khasab ah oo loo baahan yahay in la buuxiyo si loo qallajiyo saliidda si sax ah:
boqoshaada waa in la qaato maalin cad, cadceeda;
maslaha si taxadar leh loo xalliyo (bidix, da 'yar iyo xoog leh) oo la nadiifiyo qashinka;
ha ku dhaqin boqoshaada kahor qalajinta - waxay ku nuugi karaan qoyaan xad dhaaf ah;
waxaa lagama maarmaan ah in la gooyo waaweyn - waxay hoos u dhacaan geeddi-socodka qalajinta by 3-4 jeer;
boqoshaada yar oo la qalajiyey oo dhan;
ee dhexdhexaad ah dhexdhexaad ah, cap ka kala soocaan asliga ah.
Sida loo qalajiyo boletus hab dabiici ah
Haddii aad leedahay balakoonka oo ku dheggan dhinaca qorraxda, ama aad ku nooshahay gurigaaga iyo banaanka, cimiladu waa kulul, ka dibna waad qallajin kartaa saliidda jiilaalka.
Sidaa awgeed, boqoshaada diyaarsan waxay ku xayiranyihiin xarig, xoqin bartamaha, oo la joojiyo qorraxda. Waxaad subagga ku dari kartaa xaashida dubista, maro ama warqad. Si habka loo qalajiyo si sax ah loo qaato, waxaa lagama maarmaan ah in boqoshaada aaney xidhiidh la lahayn oo ay dabeyluhu ku dhacaan - ka dibna waxay ku qallajin doonaan 3-4 maalmood.
Waa muhiim! Mushrooms ee qalajinta, salting ama qaboojinta waa inay marwalba noqotaa mid cusub. Kaliya chanterelles waxay ku haboonaan kartaa goosashada muddo ka badan hal maalin. Butters iyo bolettes waa in si dhaqso ah looga shaqeeyaa kaddib marka la isku daro.
Sida loo qalajiyo foornada iyadoo la isticmaalayo foornada
Haddii cimiladu xumaato, subagga ayaa la qalajin karaa foornada. Isla mar ahaantaana, boqoshaada waxaa la dhigaa xaashida dubista (grate) ee lakabka keliya, waxaa lagu rakibay tiirarka sare ee foornada, albaabka ayaa ka baxaya qulqulka si loo siiyo helitaanka hawada; Inta lagu jiro muddada qalajinta, heerkulku waa inuu ahaado 45-50 ° C. 4-5 saacadood ka dib, waa in kor loo qaado qiyaasta 70-80 waana inaad u gudubtaa dusha hoose ee hoose. Si aad u qallajiso boqoshaada si siman, waxay u baahan yihiin in loo soo jeesto waqti ka waqti.
Marka saliiddu ay qalalan tahay taabashada, heerkulka ayaa hoos loo dhigaa akhriska asalka ah. Saxiixa diyaargarowga - qalalan oo si sahlan loo jajabiyey (laakiin aan la jajabin) boqoshaada.
Saliidda la qalajiyey waa in lagu hayaa meel qallalan oo ku jirta bacda linenka ah ama weel dhalada ah oo leh dabool adag ah oo aan wax ka badan hal sano. Waxaad ku xiri kartaa boqoshaada qalalan ee Booqdaha kafeega ah iyo isticmaal budada loogu talagalay suugada ama suxuunta dhadhanka. Ka hor inta isticmaalka, boletus qalajiyey oo lagu qooyay 2 saacadood biyo kulul.
Waa muhiim! Musqulaha si aan caadi ahayn loo qalajiyo ayaa noqon kara kuwo cufan, oo kuwa qalalan waxay noqdaan kuwa adag oo dhaqso ahna ha ku qoynin biyaha.
Sidee loo kariyaa saliida jiilaalka
Haddii aadan jeclayn boqoshaada la qalajiyey, waxaad isticmaali kartaa siyaabo kale oo loo diyaariyo saliid - cuntada sida loogu talogalay inay samayso jiilaal badan. Boqoshaada cusbaynaya, sida qalajiyey, waxaa lagu dari karaa maraqyada xilliga jiilaalka ama waxa lagu kariyaa khudaarta.
Sida loo diyaariyo boletus for salting jiilaalka
Ka hor inta salting boletus u baahan tahay inaad kala soocaan, nadiif ah oo qoyaan. Wixii diyaarinta boqoshaada ee salting, waxaa jira xeerar isku mid ah:
Kala sooc (soo qaad oo waxyeelo, baabi'iyay);
Nadiifi oo tirtir si taxadar leh;
Isku kari ka dib marka lagu daro dhirirka iyo milixda.
Tan ugu fiican ee picking pickling boqoshaada yar.
Sida loo bilaabo boletus cusbo jiilaalka ee hab qabow
Sida caadiga ah, habka qabow ee salpingka isticmaalaan boqoshaada aan qadhaadh lahayn. Sidaa darteed, ka hor inta aan la karinin karkarinta waxaa lagama maarmaan ah in si wanaagsan loo qoyno. Si aad uga baxdid qadhaadh waxaad u baahan tahay inaad ku rushayso 7 maalmood, baddal biyaha maalin kasta.
Ka dib markii saliidda la qooyay, waxay si adag u xidhaan weel (foosto, saliid), oo lagu rusheeyey milix (1.5 qaado oo halkii 1 kg oo badeecad ah) iyo dhir udgoon. Xagga sare waxaa la dhigayaa harqood. Diyaargarowga wuxuu soconayaa 5-6 toddobaad. Ku hay meel qabow.
Sidee loo cusbooneeyaa saliidda kulul (ee gasacadaha)
Waxaa jira xiiso soo koobi karinta saliidda ka hooseysa harqoodka. Karkariyey subag la kariyey ayaa lagu shubay colander (dareeraha waxaa lagu miiray weel gooni ah) waxaana loo oggol yahay inay qaboojiso. Kadibna waxaa lagu ridaa weel ku rusheeyaa cusbo (1 tbsp 1kg oo subagga ah). Xagga sare, ku dar caleemo yar oo ah malayga horay loo dhaqay oo ku shub maraq si buuxda daboolka, dulmigu waxaa la dhigayaa meel sare. Istaag muddo dhawr bilood ah meel qabow.
Waayo, kuwa jecel in ay soo baxaan qajaar la raaco soo socda. Boqoshaada la karkariyay waxay ku ridaan marinadeey la kariyey, isku karsaaraya ilaa 10 daqiiqo. Kadibna wuxuu dhigayaa bangiyada, la duubay, dibna u rogay oo duudduubay. Wixii marinade waxaad u baahan doontaa: for 1 l oo biyo ah - 2-3 caleemo, 2 tbsp. malqacadaha oo cusbo, 2 tbsp. malqacadaha oo khal, 3 tsp oo sonkor ah, 6 barkin madow, 3 xabo oo ah buro, qanjaruufo qorax.
Ma taqaanaa? Butters waxa ku jira fitamiino A, C iyo PP. Waxay ka caawiyaan xoojinta dheef-shiid kiimikaad, kor u qaadista difaaca waxayna kor u qaadaan koritaanka maskaxda. Waxaa lagu talinayaa in la isticmaalo boletus si kor loogu qaado codka.
Siyaabaha loo dhigo saliidda
Dayrta - waqtiga diyaarinta saliidda jiilaalka. Kuwaas oo ah, xilliga qaboobaha, waxaad karin kartaa wax badan oo suxuunta kala duwan, iyo boqoshaada xayawaanka delicious qurxin doonaa cunto kasta. Qalajinta, salting, ilaalinta waxaa loo isticmaali karaa samaynta saliidda, laakiin habka ugu wanaagsan ee lagu ilaalin karo qoyaankooda iyo dhadhanka gaarka ah waa qallajin.
Hab kasta oo laguu qaboojiyo aad doorato, shuruucdu waa isku mid dadka:
saliiddu waa inay noqotaa mid cusub, oo kaliya la ururiyo;
boqoshaada waa in la kala soocaa: Dhamaan nadiifinta, dharka culus, duuban ama aan la dabooli karin waa in la gooyaa;
si fiican u nadiifi wasakhda, ciid, xayawaanka, dhulka gooyo lugta;
ka saar maqaarka ka soo daboolka - waxay dhadhamin kartaa qadhaadh iyo adkaanta boqoshaada.
Waa muhiim! Si loo qaboojiyo waxay u fiicantahay in la doorto saliid xooggan oo yar. Waa wax aan loo baahnayn in lagu dhaqo, sababtoo ah Biyaha waxay u jeedaan barafka.
Maslata waxay leedahay suufka hoostiisa hoostiisa, sidaa daraadeed waxay u fiicantahay in lagu qaboojiyo cusub. Nooca la kariyey, waxay noqdaan kuwo biyo ah waxayna lumin karaan dhadhankooda. Si aad u badbaadiso booska qaboojiyaha, waxaa wanaagsan in la jarjaro tijaabooyinka waaweyn.
Ka dib markaad daaweyso boqoshaada, ku biyo raaci biyo diyaarso oo ku daadi 20 daqiiqo suunka si ay biyuhu u tagaan.
Faafi saliidda lakabka khafiifka ah ee hoose ee qaboojiyaha oo u rog ilaa ugu badnaan si markaa lagu keydsho si dhakhso ah. 12 saacadood ka dib, boqoshaada waxaa lagu shubi karaa bac ama caag bac ah waxayna ku ridaan barafeeyaha, waxay u rogaan sida caadiga ah.
Diyaarinta dambe ee maadada noocan oo kale ah waxay dhadhamin doontaa sida cusub ee loo soo qaato. By habka, ka hor inta isticmaalka subagga la qaboojiyey barafaysan oo aan la dhalaalin karaa.
Geela la kariyey
Boletus barafu ma aha oo keliya cawska, waxaa jira siyaabo lagu yareeyo diyaarinta hordhaca ah.
Iska yaree boqoshaada la warshadeeyay oo la googooyey (kuwa yaryar ayaa loo isticmaali karaa oo dhan) oo waxay ku ridaan digsi biyo karkaraya leh (waxaad ku rid kartaa basasha). Karkari ilaa 15-20 daqiiqadood, ilaa ay ka yareeyaan cabbirka.
Waa muhiim! Ha isticmaalin suxuunta galvanized - boqoshaada way madoobaan karaan.
Ku shub saliidda shaandheeyaha (colander) oo baxo ilaa 15-20 daqiiqo si biyaha loo sii daayo. Ku dhaji boqoshaada saxaarada kuna rid qaboojiyaha ilaa 2-3 saacadood. Ka dibna si taxadar leh u kala soocida saxaarada, ku rid bacaha ama weelka cuntada iyo xiro si saliiddu aysan u qalajin, weelka si adag u xir.
Haddii aad jeceshahay dhadhanka subagga la shiilay, markaa waxaad ku shubi kartaa kahor intaan la qaboojin. Sidan oo kale, waxaad heli kartaa alaab diyaar u ah oo cunta ah oo aad u fudud in la jarjaro.
Biyo diirran ka hor biyo qabow, jebiyaan kabaha lugaha iyo jarjar yaryar (kuwa yaryar). Karkari boqoshaada, ku rid colander, mayr biyo socda oo ku shub digsi digsi kulul. Waxaad ku shiishaa saliidda cuntada ilaa nus saac, qabow. Kala wareeji weelka, si qumman u xir oo meel dhigo qaboojiyaha.
Boqoshaada barafaysan ka hor inta aan la karinin ayaa lagu talinayaa in la gooyo ka hor inta aan la qaboojin, ku tiirsanaan colander ama u wareegto qaboojiyaha.
Ma taqaanaa? Waxaa jira xiriir toos ah oo dhex mara heerkulka qaboojinta iyo nolosha rafaadka: la qaboojiyey heerkul ah -18 ° C waxaa lagu keydin karaa lix bilood, haddii heerkulku ahaa 28 ° C, nolol maalmeedka wuxuu kordhiyaa 12 bilood.
Ogaanshaha sida loo kariyo subagga xilliga jiilaalka, waxaad ku farxi kartaa dadka aad jeceshahay dhadhanka gaarka ah iyo carafka boqoshaada cusub ee la soo qaaday ilaa xilli xiga.